Shiinaha 1.6m warshad soo-saarka dhar-qallalan oo warshadeeyayaal iyo alaab-qeybiyeyaal | Hongli
* Khadkan waxsoosaarka wuxuu ka kooban yahay hal shaashad kaliya, makiinad fidsan oo dhalaalaysa, suunka gudbinta, mashiinka wareega ... iwm.
* Waa otomatik buuxa laga bilaabo quudinta maaddada illaa gunta dhalaalaysa ee duudduuban, tikniyoolajiyad baaluq ah, orod aan caadi ahayn, PFE waxay gaari kartaa 95 iyo wixii ka sareeya.
* Awooda waxsoosaarka laga bilaabo 1500kg, awooda waxsoosaarka saxda ah waxay kuxirantahay mashiinka wax soosaara iyo cabirida caaryada burqada.
2. Nooca Waxsoosaarka: Wajiga Tooska ah ee Hoos Udhaca
4. Waxyaabaha loo adeegsaday: PP
5.Degida Balac: 1600MM
6. Awooda Waxsoosaarka: 1500KG / 24Hours
7.Designed Max. Xawaaraha: 15M / daqiiqad
8.Taalinta Awoodda: 600KW
1.90 Kordhinta Koobitaanka Kaliya
3. Qalabka Kuleylka kuleylka ka hor
6.Net Charger oo wata Noolo-Bixin-Biyo-la'aan ah oo Hawada leh
7.Ciidamada Qalabka Korantada
8. Qalabka korantada iyo goynta
9.Rots ukunta iyo nuugista Nidaamka Fan
10.Automatic Sliting and Rewinding Qalabka
11.Siemens PLC nidaamka xakamaynta.
Adeegga Kadib Iibka:
1. Qalabka Fiidinta ee Filashada ah, iyo isgaarsiinta tooska ah ee fiidiyowga ah ee lacala haddii ay jirto dhibaato yar.
2. Qaybaha Shisheeyaha: Qaar ka mid ah qaybaha Worn sida isku xirka, saxanka kuleylka, iwm.
3.Whole Machine Warranty: hal sano
Loogu talo galay cirbadeynta tooska ah iyo dib u soo celinta khadadka wax soo saarka dhalaalaya ee macaamiisha oo leh tilmaamo gaar ah oo u dhexeeya 400mm - 1600mm. Khadka soosaarka dib-u-soo-celinta waxaa loo isticmaali karaa oo keliya soo-saarista dhar-dhalaalaya, laakiin sidoo kale soo-saarka agabyada dareeraha iyo dareeraha hawada. Qalabka filterka dareeraha ah waxaa badanaa loo isticmaalaa dhinacyada daaweynta biyaha, batroolka iyo warshadaha kiimikada, oo leh qaab isku mid ah, saxnaan sareeya sare leh, saameyn muuqata, iyo wasakhda xoogan ee awooda iyo nolosha adeegga. Qalabka filterka hawada waxaa badanaa loo isticmaalaa nidaamyada nadiifinta hawada, oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn nadiifinta hawada gudaha, shaandhaynta hawo qaboojinta, iwm. Waxay leedahay faa'iidooyinka wax ku oolka sare iyo awoodda boodhka sare.
Mashiinkaani kaliya ma sameyn karo soosaarida walxaha filterka dareeraha ah, laakiin sidoo kale ma aha mid dhogor ah oo aad u qaro weyn. Adoo beddelaya masaafada fog ee dhaqaajinta iyo gadaal, sidoo kale xawaaraha, khadka dib u soo celinta wax soo saarka waxay ka dhigi kartaa mid aan dhidib lahayn mid dhumuc weyn. Ka dib, qalabkan waxaa loo isticmaali karaa in lagu sameeyo maro diiran, si looga sameeyo qulqulka iyo wax kale oo dadka kululeeya.
Waxaa la yaab leh, maalmihii dhowaa, Injineerada shirkadeena waxay qorsheynayaan inay biyaha ka dhigaan lakabka xafaayadda ilmaha. Oo iyana waxay ku guuleysteen guusha cajiibka ah. Waxsoosaarka khadka khadka soo-celinta ee ay sameeyeen ayaa si fudud u biqi kara biyaha. Marka howsha soo celinta xariijinta wax soosaarka waa kala duwan tahay. Maalmaha soo socda, kooxda farsamada ee shirkaddeena ayaa horumarin doonta shaqo dheeri ah oo ku saabsan soo-celinta khadka waxsoosaarka.
Ka sokow khadka wax soo saarka dhalada dhalaalaya, mashiinka maaskaroor wejiga sidoo kale waa soosaarka shirkadeena. Marka loo eego baahida macaamiisha, shirkaddeennu waxay bixin kartaa nooc mashiinka mashiinka samaynta noocyo kala duwan.
Dib u qaabaynta qaab soosaarka khadka wax soo saarka
Waxaa loo habeeyay 400-1200mm dib u soo celinta khadka wax soo saarka dharka dhalaalaya
Prototype of line isku-darka silsiladda sheyga tooska ah:
Waxaa loo habeeyay xariijinta wax soo saarka dharka dhalaalaya 400-600mm
Muuqaal ballaadhan oo isbeeris ah ayaa dhinta